Maxay Tahay Sababta Suuqgeynta Saameyntu U Noqon Karto Istaraatiijiyaddaada Xiga | Martech Zone
Maxay Suuqgeynta Saameynta Ugu Fudud U Noqon Kartaa Istaraatiijiyaddaada Xiga
Axad, Maarso 29, 2015 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Markii aan ka hadlay suuqgeynta suuqgeynta dhanka Suuq-geynta Baraha Bulshada, waxaa i qarxiyay dalabkii iyo wada hadaladii socday ee aan la yeeshay shirkado badan intii shirku socday. Waxaan haystay qol buuxsamay macno ahaan dad farabadan ayaa iga raacaya soo bandhigida su'aalo dheeri ah oo dheeri ah fadhiga kadib.
Waan la wadaagay video rap ah in Rappitt ayaa la ii sameeyay - taas oo hadda gaadhay dhagaystayaal aad u ballaadhan iyada oo aan loo baahnayn inay mag-dhaw ii noqdaan saamayn-bixiye maxaa yeelay wuu i bartilmaameedsaday oo fiidiyowga ayuu ii sameeyay. Waxaan ka hadlay soo saarida sheekooyinka iyo istaraatiijiyadaha si loo xaqiijiyo guusha guusha iyo saameynta ay leeyihiin marka aysan shaqeynin. Anigana waxaan kahelay xoogaa jawaab celin ah oo kusaabsan sheeko sheegida taas oo ka caawin doonta saameynaha inuu sifiican ugala xiriiro badeecada ama adeega aad rabto inaad la wadaagaan.
Noocyada waxay jecel yihiin Suuqgeynta Saameynta maxaa yeelay waxay u adeegi kartaa ujeedooyin kala duwan (marka lagu daro ujeedada ugu cad, kordhinta iibka): darajada bogga, soo-gaadhista, daacadnimada macaamiisha, jiilka UGC, koritaanka kanaallada bulshada, fayraska waxyaabaha ku jira, iyo waxyaabo kale oo badan. Macaamiisha way jeceshahay maxaa yeelay waxay la timid sida runta ah. WAana loo soo bandhigaa iyaga waqtiga saxda ah. Markuu macaamilku ka baaraandegayo baloog ku saabsan qurxinta guriga… taasi waa waqtiga ugu habboon ee loo soo bandhigi karo iyaga oo leh xiriirin ku aaddan kursiga Eames (ee sumaddaadu ay hadda soo bandhigayso), iyada oo lagu muujiyay macnaha guud ee saamaynta saamaynta guriga. Habkan macnaha guud ayaa aad uga waxtar badan marka loo diro emayl spammy ah waxa ugu horeeya subaxa hore… marka ay shaqada tagayaan.
Cunsurka muhiimka ah ee helitaanka wax-ku-ool ma aha jahwareer ku yimaada gaadhista ama caan ahaanta. Raacid balaaran macnaheedu maahan in dhagaystayaasha ama bulshada ay ku qulqulayaan inay iibsadaan alaabadaada ama adeeggaaga. Xaqiiqdii, inbadan oo loogu yeero saamileyaal waxay leeyihiin caan caan ah - taasi macnaheedu maahan inay saameyn ku yeelan karaan dhaqanka iibsiga kuwa iyaga raaca.
Waa lagama maarmaan inaad hesho qof leh dhagaystayaal isku mid ah oo awood u leh inaanu kaliya kor u qaadin wax soo saarkaaga ama adeeggaaga - laakiin inaad ku qanciso kuwa raacsan una horseedo meheraddaada halkaas oo aad markaa u beddeli karto. Saamayntu ma iibinayso, ereyga saamayn macno ahaan wuxuu ka yimid ereyga socodka. Shaqada saameyntu waa inay kugu soo hagaajiso socodka adiga si aad uga faa'iideysan karto kalsoonida iyo awoodda uu saameyntu horay u dhisay oo aad uga faa'iideysan karto inay tahay mid adiga kuu gaar ah.
Shelf horumariyey boggan 'infographic' waana mid saameyn ku leh suuqgeynta suuqgeynta si loo aqoonsado oo loola xiriiro saamileyaasha loona cabbiro guusha ololaha la fulinayo.
Tags: suuqgeynta suuqgeyntaistaraatiijiyada suuq geynta saamayntashelf
StatDragon: Falanqaynta Sare ee Vimeo
6 Siyaabood oo Fudud Oo Lagu Kordhiyo Saamaynta Suuqgeynta Mawduucaaga